Sei sarudza alorair
Kuchenesa & Restoration Dehumidifiers
Crawlspace & bhesimendi Dehumidifiers
Crawlspace & bhesimendi
Emirayiridzo & Pictures
Kuchenesa uye Restoration
Crawlspace uye bhesimendi
Garandi / garandi Registration
sevarindi HD55 Maintenance Video
sevarindi HD90 Maintenance Video
sevarindi HDi90 Maintenance Video
Dutu Ultra Maintenance Video
How kushandisa Video
How kushandisa Sentinel HD90 Videos
How kushandisa Sentinel HDi90 Videos
How kushandisa Sentinel HD55 Video
How kushandisa Storm Pro Video
How To Shandisa Storm Ultra Video
Other rwokugadzira pfungwa
Sei dehumidifiers kushanda?
Dehumidifiers motora mwando kubva mumhepo muriise kuva akadzikama uye kupisa exchanger zvinogona kutanga zvokuchinja mhepo kuti mhute ne kudziyisa. Zvino kuti mhute dzora pamusoro condensing chubhu. Pakupedzisira, condensate mvura kubvisa maererano zvikasabudiswa mutsinga dzinofamba nemukaka.
dehumidifier My zvikasashanda, ini chii kuita?
1). Ongorora tembiricha siyana uye iva nechokwadi chokuti chivhariso yave akaiswa zvakarurama.
2) .Visit www.alorairsolutions.com uye kupinda Free Registration FAQ hurongwa kunyoresa mibvunzo yenyu. Dhipatimendi redu basa kuchaita taura iwe uye kupa mhinduro pakarepo.
3). Unogonawo kutumira e-mail kuna AlorAir Department Service nokuda kero sales@alorair.com mamwe mashoko. Kana unogona kutaura yomunharaunda Distributor kana AlorAir Service Department pa 888-990-7469 uwane ruzivo
Ndinofanira kuitei ruzha ruzha apo chikwata mabasa?
Chekutanga, iva nechokwadi chokuti hadzisisina kutoitwa pamusoro sandarara uye yakasimba pasi. Chechipiri, tarisa Sefa pajira riya kuti chokwadi havana wavharwa. Kana Sefa pajira riya riri wavharwa, tapota kunze uye yakachena.
Ndiri kuwana readout remitemo vamwe mhando iri kutonga kwangu remadziro. Kupi Ndinogona kuwana mazita kukanganisa Codes?
Error Codes anogona rawanikwa kubva varidzi 'Chinyorwa (inowanikwawo pa www.alorairsolutions.com pasi Product pfuma, emirayiridzo). Nokuti vamwe chokwadi, tapota kutipa akushanyire 888-990-7469.
Chii upenyu basa AlorAir dehumidifier?
upenyu basa The chikwata vanogona kuva makore 8 kana kupfuura dzimwe nguva zhinji.
Chii chengetedzo certifications (CE, ETL, CSA, etc) kuti AlorAir zvigadzirwa kutakura?
Vamwe zvivezwa zvedu kutakura ETL, CE uye Energy Star advertising.
Ndingavawanepi gwaronhau AlorAir midziyo yangu?
Unogona kuwana city Chinyorwa website yedu. Kana usingakwanisi download, nyorera AlorAir Rebasa 888-990-7469. Tinogona Fax kana paemail iwe munhu wokutsiva pasina muripo.
Pane dzinonetsa pfungwa kuti dehumidifier kuchengetera muchando?
Usati nekuchengeta dehumidifiers muchando, iva nechokwadi zvose mvura kudururirwa kubva chikwata. Uyezve, iva nechokwadi chokuti mvura iri Drain chubhu kwave kudururirwa kudzivirira cracking walnut. The zvidzidzo hadzina weatherized, saka havagoni kuiswa kunze.
Kupiko AlorAir yangu chigadzirwa Serviced?
Kakawanda chikwata chenyu chinogona Serviced ne- vanopupurirwa HVAC mukoti; unogona kuisa chikwata kwatiri basa. Tapota isu call 888-990-7469 kuziva sei kutanga muitiro.
Chii AlorAir ndechei urongwa?
Ndapota anoreva AlorAir kudzoka mutemo panguva Website www.alorairsolutions.com.
Ndingatarira anotakura midziyo yangu?
Tinokurudzira Shipping kuti chikwata kubudikidza FedEx Express Saver.
Address: 16300 shangu Ave, Cerritos, CA90703